Maungtintyin: ကြည်ကြည်သာသာနှင့် Goodbye လို့ ပြောဆိုလျှက်…
လူတစ်ယောက်ဟာ အခိုက်အတံ့တိုင်းနဲ့ ပြီးတော့ အလှအပ- အချစ်- ပျော်ရွှင်မှု- အဲဒါရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု အဆင့်ဆင့်တိုင်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးယင်တော့ သဘာဝဖြစ်တဲ့ သူရဲ့သေခြင်းက သူ့ဘ၀တစ်ခုလုံး ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ နောက်ဆုံးအထွတ်အထိပ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သေခြင်းတရားဟာ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တယ်ဆိုလျင် ဒါဟာ သင့်ရဲ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အလဟဿဖြုန်းတီး ပြီးပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သေခြင်းတရားဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကြိုဆိုလက်ခံခြင်းတစ်ခု- အကျွမ်းမ၀င်သေးတဲ့ အရာသို့ ခုံခုံမင်မင် ၀င်လာခြင်းတစ်ခု- သူငယ်ချင်းဟောင်းများကို, ကမ္ဘာဟောင်းကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နှုတ်ဆက်ခြင်းတစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အလွမ်းဇာတ်အဆွေးဇာတ်တစ်ခုခု မဖြစ်သင့်ပါ။
Zen master Lin Chi ဟာ သေအံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တပည့် ထောင်ပေါင်းများစွာက နောက်ဆုံးစကားကို နားထောင်ဖို့ စုရုံးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Lin Chi ဟာ ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး ပြုံးလျှက် စကားတစ်လုံးမျှ မပြောဆိုဘဲ ထူးမခြားစွာ ရိုးရိုးစင်းစင်းပဲ လဲလျောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သေတော့မယ်ဆိုတာရယ်-စကားတစ်လုံးမှမပြောတော့ဘူးဆိုတာရယ်ကို မြင်ရတဲ့အခါ တစ်စုံတစ်ယောက်က Lin Chi (သူကိုယ်တိုင်က သူငယ်ချင်းမိတ်ဟောင်းတစ်ယောက်- သူကိုယ်တိုင်က အရှင်သခင်တစ်ယောက်ပါ)ကို သတိပေးပါတယ်။
Lin Chi! သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားများကို ပြောဆိုရမယ်ဆိုတာကို သင် မေ့နေပြီလား? ငါက သင့်ရဲ့မှတ်ညဏ်ဟာ ပုံမှန် မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကို အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်။ သင်ဟာ သေအံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်နေတယ်။ သင် မေ့နေပြီလား? Lin Chi က “နားထောင်ယုံ သက်သက်မျှပါ” လို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်မိုးပေါ်မှ ချဉ့်နှစ်ကောင်ဟာ ပြေးလွှားနေပါတယ်။ စူးစူးဝါးဝါးအော်နေပါတယ်။ သူက “ဘယ်လောက်များ လှပလိုက်သလဲ!” လို့ ပြောပြီးတော့ သူဟာ သေဆုံးသွားပါတယ်။
ခေတ္တခနအခိုက်အတွက် “နားထောင်ယုံ သက်သက်မျှပါ” လို့ သူပြောတဲ့အခါ တကယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကြီးကျယ်တဲ့တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောတော့မယ်- လို့ လူတိုင်းက တွေးဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရှဉ့်နှစ်ကောင် တိုက်ခိုက်နေတာ- စူးစူးဝါးဝါးအော်နေတာ- ပြေးလွှားနေတာကိုသာ ပြောပြီး အဲဒီနောက် သူဟာ ပြုံးလျက် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာပဲ သူ့ရဲ့သတင်းစကား ဖြစ်ပါတယ်။ အရာဝတ္ထုများကို သေးငယ်အောင် ဒါမှမဟုတ် ကြီးကျယ်အောင် ပြီးတော့ အရေးမပါတာတွေ အရေးပါတာတွေ ပြုလုပ်မနေပါနဲ့။ ခေါင်မိုးပေါ်မှာပြေးနေတဲ့ ရှဉ့်နှစ်ကောင်လို အရာရာတိုင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ခြားနားမှုမရှိပါ။ ဘ၀ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းမှာ အားလုံးဟာ တူညီပါတယ်။ ဒါသည်ပင် သူ့ရဲ့ဖီလိုဆိုဖီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သေးငယ်တဲ့အရာဆိုတာ မရှိပါ။ ဒီအရာ အားလုံးဟာ သင့် အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ သင်ပြုလုပ်တဲ့အရာအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ကမ္မဌာန်းထိုင်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ ပြီးတော့ အရာအားလုံးဟာ ငြိမ်သက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကြည်လင်အေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။ နူးညံ့လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကမ္မဌာန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကို ဘ၀မှာ အပြင်ဘက်သို့ သယ်ဆောင်လာဖို့ ကြိုးစားပါ။ အဲဒါကို ဝေမျှပါ။ အကြောင်းက ဝေမျှထားတဲ့အရာရာတိုင်းဟာ ခိုင်မြဲပါတယ်။
အဲဒီနောက် သင် သေခြင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိပြီလို့ ဆိုတဲ့အခါ 'သေခြင်းမရှိ' - ဆိုတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။ ၀မ်းနည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျက်ရည်အတွက် မလိုအပ်တော့ဘဲ - (ပျော်ရွှင်မှုရဲ့မျက်ရည်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ် - ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းမှုမျက်ရည်တော့ မဖြစ်နိုင်) သင်ဟာ Goodbye လို့ ပြောနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းမှ စတင်ရပါ့မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပထမဆုံး- သင် သယ်ဆောင်လာတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ အားလုံးကို လွှတ်ပစ်ရပါ့မယ်။ ဘ၀ဟာ ရိုးစင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ပျော်ရွှင်မှုများ ကပွဲများဖြင့် ပြည့်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘ၀ကို ၀မ်းသာမနေသင့်၊ ပြုံးပျော်မနေသင့်၊ ဒါမှမဟုတ် ရယ်မောမနေသင့် ဆိုတာနဲ့ - ပြီးတော့ ဘ၀ဟာ မကောင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် ဒါဟာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်ထားတဲ့သူအချို့ ရှိပါတယ်။
အခြေအနေက - ဒါဟာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင့်ကို ဆက်လက်ပြောဆိုပြီးတဲ့ အဲသလိုအခါ - သင်ဟာ အရာဝတ္ထုများကို မှားယွင်းစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတာကြောင့် သင် ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ အဲသလိုအခါ - ပြီးတော့ ဒါဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားဖို့ သင့်ကို ခြေစုံပစ်ဝင်စေတဲ့နေရာ ထောင်အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ အဲသလိုအခါ- ဘယ်လိုအရာနဲ့များ သင် ပျော်ရွှင်နိုင်တော့မှာလဲ?
ဘ၀ဟာ ဆုလာဘ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါကို ရှာဖွေပြီးတဲ့သူများ - ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူများကိုသာ- အဲဒါကို ပေးအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင်က အလှဆင်အလှမပြင်လျင် - သင်ဟာ အဲဒါကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့ အတိုင်းမျှသာ ထားမယ်ဆိုလျင်- အဲဒါက အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနှင့် တသီးတခြားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် မသေးငယ်လွန်းသော ပျော်ရွှင်မှု- မပိုလွန်းသောအလှအပ- မနည်းလွန်းသော မွေးကြိုင်တဲ့ရနံ့ အဲဒါကို ကျန်ရစ်စေပါ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Tuesday, January 25, 2011